သေပြီးတဲ့လူတွေကိုတောင် စော်ကားနိုင်တဲ့ အောက်တန်းစားလူမျိုးတွေရှိတဲ့ နိုင်ငံ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Bringing Myanmar killers to justice tops summit agenda
နိုးထလာသော အမျိုးသားရေး »
♦ ‎”သေပြီးတဲ့လူတွေကိုတောင် စော်ကားနိုင်တဲ့ အောက်တန်းစားလူမျိုးတွေရှိတဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်ရတာ ရှက်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားတော့ ပြင်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျ။ ရိုးရိုးသားသား သတိပေးတာပါ၊
တောင်ငူမြို့အ၀င်မှာ ရှေးဟောင်းမွတ်စလင်မ်သင်္ချိုင်းနဲ့ သမိုင်းဝင်ဗလီတွေကိုဖျက်ဆီးပြီး ဘာလို့ “ပေါ်တော်မူ”ဘုရားဆိုပြီး တည်ဆောက်ထားပါသလဲ?
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်လို့ “ပသီ-ပါတီ”ကို မှတ်ပုံတင်ခွင့် မပေးတာလား?
♦ တောင်ငူက ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း ဟံသာဗလီအရှေ့ဘက်က “တားမြစ်နယ်မြေ”လို့ ဆိုင်းဘုတ်ချိတ်သိမ်းယူထားတဲ့ ဗလီပိုင်တိုင်ခန်းတွေနေရာမှာ နှစ်ပတ်လည် ဆွမ်းလောင်းအသင်းဖွဲ့ပြီး ဆွမ်းချက်ခြင်း၊ ဆန်အိတ်များထားခြင်းတွေအပြင်
♦ တောင်ငူ၊ ကန်တော်လမ်း၊ မန်းရပ်မှာရှိတဲ့ မွတ်စလင်မ့်အိမ်တွေကို “တားမြစ်နယ်မြေ”သတ်မှတ်ပြီးသိမ်းဆည်းခြင်း၊ သိမ်းဆည်းထားတဲ့နေရာတွေမှာ အခွန်လွတ်ဈေးဆောက်လုပ်ပစ်ခြင်း၊ မရမ်းကျောင်းရဲ့ တောင်ဘက်မုဒ်ဦးအဖြစ် သိမ်းပိုက် အသုံးချလိုက်ခြင်းတွေဟာ မင်းမဲ့စရိုက်တွေ မဟုတ်ပါလား?
This entry was posted on August 12, 2012 at 2:10 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.